Mandrakitra tantaram-pampandrosoana lovainjafy any Afrika ny fetiben’ny sarimihetsika · Global Voices teny Malagasy
Voalohany teto amin'ny kaontinanta ny FTMF Fetiben'ny Filma Iraisampirenena
Voadika ny 21 Oktobra 2021 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Ελληνικά, Español, Français, українська, English
Afisin'ny Fetibe Iraisam-pirenena ho an'ny Sarimihetsika karakarain'ny FTMF. Sary nomen'i Taye Balogun ary nahazoana alàlana.
Hasongadina sy halefa amin'ny efijery mandritra ny Fetibe Iraisam-pirenena ho an'ny Sarimihetsika virtoaly voalohany (NGOIFF) izay tontosain'ny FTMF manomboka ny 20 ka hatramin'ny 22 Oktobra 2021 ny sarimihetsika mampiseho ny fandaharan'asa manerantany momba ny fampandrosoana lovainjafy (SDA).
Ny NGOIFF, voalohany amin'ny karazany izay mikendry ny mpijery Afrikana, dia mikasa ny hamorona sehatra ho an'ireo mpitantara, mpamokatra sarimihetsika, manam-pahaizana momba ny fampandrosoana ary ireo mpandray anjara hafa hianarana sy hizarana haizatra momba ny fanaovana fanadihadiana sy ny fitantarana tantara momba ny fampandrosoana lovainjafy.
Ankoatra ny fandefasana ny horonantsary amin'ny efijery, hisy ihany koa ny atrikasa izay manamora ny fifampiresahana sy ny hetsika eo amin'ny fifangaroan'ireo famoronana, mpamorona, mpikatroka ary mpanentana samihafa izay miasa amin'ny Tanjon'ny Fampandrosoana Lovainjafy any amin'ny fetibe. Manao fanentanana mba hampitomboana ny fifantohana sy ny hetsika manoloana ny fahantrana, ny fampandrosoana ny vehivavy sy ny zatovovavy ary ny hamehana mikasika ny toetr'andro ny SDG, tohanan'ny Firenena Mikambana. Hanampy amin'ny fampitana fahalalana sy fahaiza-manao eo amin'ireo mpikatroka mpandray anjara ity famindram-bovomboñin-kevitra amin'ny fetiben'ny sarimihetsika virtoaly ity. Hizara ireo sarimihetsika ireo ho an'ny oniversite miisa dimy izay hampiasa azy ireo ho fitaovana fampianarana ny fetiben'ny sarimihetsika.
Nanamafy i Taye Balogun, talen'ny fetibe ONGIFF, teratany Nizeriana, mipetraka any Nairobi fa “manana ny hery hamahana ireo hevi-dehibe saro-takarina mba ahafahan'ny olona mahazo izany amin'ny fomba mora ny horonantsary.”
Nanambara i Balogun, izay nitafa tamin'ny Global Voices tamin'ny alàlan'ny Zoom, fa “mazàna tsy aseho amin'ny fetiben'ny horonantsary mahazatra” ireo sarimihetsika marobe ataon'ny FTMF fampandrosoana, izay novokarina isa-taona, ka izany no ilana an'ity fetibe ity.
“Nandritra ny taona maro no nanaovan'ireo FTMF fandraketana ny tantarany sy ny zavatra hitany kanefa tsy nozaraina firy mba hianaran'ny olona hafa ny ankamaroan'ireny sarimihetsika ireny,” hoy izy. “Noforonina ny fetiben'ny sarimihetsika mba hampisehoana ireo sarimihetsika ireo sy ahafahana mifanakalo hevitra.”
Amin'ny mpijery voafetra toy izany, mahalana vao mahatratra mpijery marobe ny fahalalana avy amin'ny sarimihetsika tontosain'ny FTMF ary tsy miparitaka ny lesona nanaovana fanadihadiana, hoy i Balogun.
“Ahoana no fomba ianarantsika avy amin'ireo teknika voasedra sy azo itokisana nampiasain'ireo tantsaha any Malawi hiadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro?” hoy i Balogun nanontany. Ohatra iray fotsiny amin'ny fampahalalana mahasoa izay hita amin'ny sasany amin'ireo sarimihetsika izany. Saingy noho ny maha-voafetra ny mpijery an'ireto sarimihetsika ireto dia tsy zaraina betsaka na hamaroina ny fahalalana azo avy amin'ireto sarimihetsika tontosain'ny FTMF ireto. Izany no hantsana lehibe kasain'ny fetibe haravona.
Nahasarika sarimihetsika miisa 90 avy amin'ny fikambanana miisa 150 any amin'ny kaontinanta 4 ny fetiben'ny sarimihetsika. Sarimihetsika miisa 40 ihany no voafidy tao anaty lisitra, ary halefa amin'ny efijery mandritra ny fetibe ny 20 amin'izy ireo. Ny mpitsara no nanao ny fifantenana izay nahitana mpitsara miisa valo manam-pahaizana malaza manerantany amin'ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy, ao anatin'izany ny mpikatroka mafana fo miady amin'ny kolikoly avy any Nizeria, Hamzat Lawal, ilay mpamokatra sarimihetsika Keniana Sarika Lakhani, ary ny tale jeneralin'ny orinasa sosialy EdTech any Myanmar Hla Hla Win.